အနာဂတ်အတွက် ကလေးသူငယ်တွေ ဘယ်ဆီကိုသွားမလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အနာဂတ်အတွက် ကလေးသူငယ်တွေ ဘယ်ဆီကိုသွားမလဲ
အနာဂတ်အတွက် ကလေးသူငယ်တွေ ဘယ်ဆီကိုသွားမလဲ
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Sep 9, 2011 in Creative Writing | 12 comments
သူတို့ အတွက်စဉ်းစားကြမယ် ခေတ်ကာလ ကလေးတွေ
ကျွန်မက ပို့ စ်တွေတော့သိပ်မရေးဖြစ်ပါဘူး။ကွန်မန့် တွေမှာဘဲ အတွေ့ များပါတယ်လို့ ကိုသစ်မင်းပြောမှ ပြန်စဉ်းစားမိပါတယ်။ကျွန်မကို တော်တော်များများက အမြင်ကတ်နေပီလားပေါ့။ဒါမှ မဟုတ် ပါလေရာငပိချက်ပေါ့။
အဲလိုတော့ မဟုတ်ရပါဘူး။ကျွန်မကရေးချင်တယ်။မရေးရဲဘူး မရေးရဲဘူးဆိုတာကလဲ ကိုယ်တိုင်က စာသိပ်မဖတ်ဖြစ်တာကြာတော့ ရေးလိုက်တဲ့ပို့ စ်ရဲ့ ပေးမိတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေးမှားသွားမှာကြောက်လို့ ပေါ့။
တနေ့ နေ့ များပြားလှတဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေ၊မောင်လေးကျောင်းအကြိုအပို့ တွေနဲ့ ကြားက MG မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ရတော့ သည်းခံဖတ်ပေးကြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးဥပကာရပြုရမှာပါ။တနေ့ က အလုပ်ကိစ္စလေးနဲ့ ကွန်ပြူတာနက်ဂိမ်းဆိုင်လေးကိုသွားရတယ်။အဲဒီမှာတွေ့ ရတဲ့ ကျောင်းသားကလေးငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ အပြောလေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ ပြန်ဝေမျှပေးပါရစေ။
ကျောင်းသားလေးတွေ အများအားဖြင့် အသက် ၁၂၊၁၃ အရွယ်လေးတွေပေါ့၊နက်ဂိမ်းဆော့နေကြတာ။ခေတ်ကာလ ကလေးတွေ တော်တော်လေးတတ်နေကြပါပီ။ကျွန်မက အဲဒီထဲက ကလေးတယောက်ကို မေးမိတာ။သားရေ ဘယ်အတန်းကလဲ ဆိုတော့ လိမ်လိမ်မာမာပါဘဲ။သူ ၆ တန်းရောက်ပါပီ ၊C ခန်းကပါပေါ့။ သားရေ Aခန်းမသွားချင်ဘူးလားပေါ့ ကျွန်မကလဲ လေရှည်မိတယ်။
သူကပြန်ပြောလိုက်တယ် “မသွားချင်ဘူး အန်တီလေးရေ A ခန်းမှာ ပိုက်ဆံကောက်တာများတယ်တဲ့”။
“ သားက စာမကြိုးစားချင်ဘူးလား၊သူတို့ Aခန်းက ကလေးတွေစာတော်ကြတယ်လေ။ဟင့်အင် အများကြီး မဖတ်ချင်ပါဘူး၊တဲ့”
ကျွန်မပြန်ပြောစရာမရှိလောက်အောင်ဆွံ့ အသွား တယ်။ကလေးသူငယ် တွေဒီ အတွေးဝင် နေပီ။ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲပေါ့။ခု နက်ဂိမ်း ဆိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကလေးတွေတော်တော်များများက counter strike လို ဂိမ်းတွေကိုဆော့နေကြတာ။ခုဏက ကလေးလဲ ဒီဂိမ်းဘဲဆော့မှာပါတဲ့။အင်မတန်နုနယ်တဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး သတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ ဂိမ်းတွေက သူတို့ ဦးနှောက်တွေကို အရောင်တွေဆိုး ပြောင်းလဲပစ်နေတာကိုတွေးရင်း ကျွန်မရင်ထဲက မောဟိုက်ပြီး တခုခု လိုသလို ခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်။
counter strike က ကျွန်တော်တို့ လည်း စွဲစွဲလန်းလန်း ကို ကစားခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခု သိတ်ခေတ်မစား
တော့ဘူး ထင်တယ်ဗျ။ counter strike ထက် ကလေးတွေနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ ဂိမ်းတွေ ရှိနေတယ်ဗျ။ GTA Vice City ဆိုတဲ့ဂိမ်းက ကလေးတွေကိုပေးမကစားသင့်ဘူး ဗျ။ ဘယ်လိုဂိမ်းမျိုးလဲဆိုတာတော့ ဂိမ်းထဲမှာ မင်းသားက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ လမ်းပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်ကိုသတ်လိုက်လဲ ပိုက်ဆံရတယ်၊ ကားလှလှလေးမြင်လို့ စီးချင်ရင် လုပြီးစီးလို့ရတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာ ပိုက်ဆံနည်းနည်းရှိလို့ ကားလှလှလေးတစ်စီးရှိရင် မကောင်းတဲ့မိန်းမပါ ဂိမ်းထဲမှာ ခေါ်လို့ရတယ်ဗျ။ အဲလိုဂိမ်းမျိုးတွေကို ဂိမ်းဆိုင်တွေမှာ မထားသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက စိစစ်ရမယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဗျာ
ViceCityမှာ ရဲလိုက်လို့ ထွက်ပြေးချင်လည်း leave me aloneဆိုပြီး ၀ှက်ကုဒ်ပေ့ါ
ရိုက်လိုက်ရင် ရဲကဆက်မလိုက်တော့ဘူး (တခြားကုဒ်တွေလည်း ရှိသေးတယ်)
ဂိမ်းထဲက မိန်းမပုံတွေကလည်း ဘီကနီတွေနဲ့
CounterStrike ကစားနိုင်တာ တော်တော်သဘောကျတယ်
ပြီးတော့ နေရာတွေ သိပ်မမှတ်မိလို့၊ ဥာဏ်ကမကောင်းဘူး
စာလည်းပြိုင်၊ အလှူငွေလည်း အပြိုင်ထည့်နိုင်ရပါမယ်
ဘာဖြစ်ဖြစ်Aခန်းမို့ ဆိုတာလေးက တွဲပါလာပြီးသားဆိုတော့
(တချို့ကျောင်းတွေမှာတော့ Sခန်းဆိုတာရှိသေးတယ်၊ စူပါဆိုလား စပယ်ရှယ်ဆိုလား)
ွှအခု ကလေးတွေ Dota ကို တော်တော်များ ဆော.တယ်လို.ထင်ပါတယ်(ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ. :P)
ဒီဂိမ်း ကစားနေ၇င် ဆဲနည်းပေါင်း စုံ အလိုလို တတ်လာပါတယ် (မယုံ၇င် တစ်ခါလောက် ဂိမ်းဆိုင် သွားကြည်.နော :P)
၇န်ကုန်တော. မသိဘူးဗျ မန္တလေး မိန်းထဲမှာ ဆို နက်ဂိမ်းဆိုင်တွေမှာ အင်တာနက်ေ၇ာ တွဲ ဖွင်.လာတယ်
ပြီးတော. ပြိုင်ပွဲတွေလဲ ကျင်းပပေးတယ် တော်တဲ.သူဆို လခပေးပြီး ဘယ်လောက်ဆော. ဆော.
ပိုက်ဆံ မပေး၇ဘူးဗျ မက်လုံးတွေနဲ ဖျက်စီးနေတာလား နောင်တစ်ခေတ် ကမ္ဘာမှာ မြန်မာကွဆိုပြီး
ဂိမ်းတွေ ယှဉ်ပြိုင် ကစားနိုင်အောင် သင်နေတာလားတော. မသိဘူးနော………..
တကယ်တော့.. ကလေးက သူ့အရိုးခံနဲ့.. ဒီအတိုင်းပြောလိုက်တာပါပဲ..။
ဒါကို လူကြီးတွေက.. ချိန်ဆလုပ်ပေးရ.. လုပ်ထုံးဥပဒေတွေလိုက်ညှိပြင်ရမှာပေါ့…။
မြန်မာပြည်မှာ.. စာတမျိုးထဲ..ကလေးကိုအတင်းတွန်းနေတာကလည်း.. သိပ်မမှန်လှဘူးထင်မိတယ်..။
အခုလိုကလေးမျိုးက.. တခြားအားကစား၊ အနုပညာ တခုခုချွန်နေနိုင်တာပဲ..။
သူဘာကျွမ်းကျင်သွားနိုင်သလဲ.. ဘယ်မှာပါရမီရှိသလည်း.. မိဘဆရာတွေက စောင့်ကြည့်ရင်း .. လမ်းညွှန်သင့်တယ်ထင်မိတယ်..။
အဓိကကတော့ … ကလေးတွေအတွက်.. လမ်ညွှန်ပြသ..မြှင့်တင်ပေးရမဲ့.. စံနစ်ဥပဒေလုပ်ထုံးတွေ လိုနေတယ်ထင်မိပါတယ်..။
ခုခေတ်က ခေတ်မှီတာလား။ ကလေးတွေကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာလား။ ပညာရေးပိုင်းကို အားလျော့စေတာကတော့ ဂိမ်းတွေ အဆော့များလာတာတွေ့ကြတယ်။ တချို့မိဘတွေဆို ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကို နက်ဆိုင်မှာ ခဏလာထားပြီး သွားစရာရှိတဲ့နေရာကို သွားကြတာဆိုတော့ ကလေးတွေကလည်း နက်ဆိုင်မှာ ဂိမ်းဆော့လို့ရတော့ ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ် ဆော့ရရင်ပျော်နေကြတာပါပဲ။ တချို့ကလေးတွေကျတော့လည်း သူ့တို့ဘာသာ သူတို့ နက်ဂိမ်းဆိုင်လာကြတယ် ပြီးရင် ဆိုင်ကို တစ်နာရီသုံးမယ် ဖွင့်ပေးပါ ပြောပြီး အကျအနထိုင်ဆော့တော့တာပါပဲ။ နောက်ဆုံး ပညာရေးတဲ့ အနာဂတ်မှာ ဂိမ်မာတွေများလာမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်မိတာပါပဲ။
ကလေးတွေကို ဂိမ်းက တော်တော်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လူကြီးတွေထဲမှာလဲ (အရွယ်အမျိုးမျိုး) ဂိမ်းစွဲနေတာ တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လုပ်ပစေလေ။ ကိုယ့် ရွေးချယ်မှု့နဲ့ကိုယ်ပေါ့ …။
ကလေးတွေအတွက်တော့ လမ်းမမှားဘို့ရာ လူကြီးတွေကပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ လူကြီးဆိုတာမှာ မိဘ ဆရာ တွေတင်မက ရပ်ကွက်မြို့ရွာ အာဏာပိုင်တွေ အုပ်ချုပ်သူတွေအထိ ဆိုလိုချင်ပါတယ်။
အကျိုးမများတာကို အလွန်အမင်းမလုပ်အောင်ဆိုရင် စာသင်ခန်းဆီ အတင်း “တွန်းပို့” ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
စာပေ ပန်းချီ အနုပညာ အားကစား စတဲ့ အကျိုးရှိတာတွေဆီရောက်လာအောင် “ဆွဲခေါ်” နိုင်ရပါမယ်။ ဆွဲဆောင်နိုင်ရပါမယ်။ ဘာမှလုပ်စရာမရှိလို့ ဂိမ်းပဲဆော့နေရင်း စွဲနေကြတာပါ။
လုပ်စရာတွေ လှုပ်ရှားမှု့တွေ များများဖန်တီးပေးနိုင်ရင် ဂိမ်းထဲမှာနစ်နေမယ့်ကလေး ရှားသွားမှာ …
pan pan ရေ
အဲဒီဂိမ်း ကလေးတွေလောက်ပဲဆော့တာများပါတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဘယ်လို နားလည်ရမှာလဲခင်ဗျာ။
ဒီပို့စ်က ကလေးတွေ အတွက် ဆွေးနွေးနေကြတာလေ။ အဲဒီကလေးတွေ မကစားသင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်က
ပြောနေတာပါ။ ကျွန်တော် ကလေးတွေနဲ့လည်း ကောင်တာပစ်ပါတယ်။ မောက်စ် နိုင်ရင် ကောင်တာ ပစ်လို့ရပါတယ်။ အစတော့ ဘယ်ဂိမ်းမဆိုခက်ပါတယ်။ အခုခေတ် ဂိမ်းဆိုင်ထဲက ကလေးတွေ ဆဲနည်း မျိုးစုံအောင် တတ်ပါတယ်။ ဂိမ်းဆိုင်ထဲမှာ လေ့လာကြည့်ပါ။
ကလေး သူငယ်တွေဂိမ်းဆော့ တာကို မကောင်းဘူးလို့ မမြင်ပါဘူး။သူတို့ လေးတွေ နေရာလေးတွေတိကျအောင်မှတိထားနိုင်တယ်။သဲထိတ်ရင်ဖို ကစားကြတယ်။တခါတလေ အကြီးတွေက ဆဲပြတော့ လိုက်ဆဲကြတယ်။
အဲဒီမှာ ပြဿနာစပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့စာရိတ္တနိတိ၊ကို ပဲ့ပြင်ထိန်းသိမ်းပြသပေးမယ့်လူ ကြီးတွေမှာ ပိုတာဝန်ရှိလာတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ခေတ်ကို လက်မခံလို့ မရပါဘူး။ကျွန်မဆိုဆယ်တန်းအောင်မှ ကွန်ပျူတာကိုစတင်ထိတွေ့ ဖူးတာ။ဒါပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့ ခုချိန်ထိကောင်းကောင်းအသုံးမချတတ်သေးဘူး။သူတို့ လေးတွေ အရွယ်မှာ တကယ်ထိရောက်အောင် နည်းပေးလမ်းညွှန်မှုကနည်းနေတယ်။ဂိမ်းဆော့တာက အကျိုးရလာဒ်ထက် အကျင့်စာရိတ္တပိုထိတယ်ထင်လို့ ပါ။
ကျေးဇူးပါ ကိုသစ်မင်းရေ။ခုလိုပြောပေးဖော်ရှိတော့ အားတက်ရပါတယ်။နောင်လဲကြိုးစားပြီး ပို့ စ်တွေရေးပေါ့မယ်။အားလုံးသောရွာသားတွေဆီမှာ ပညာတွေအများကြီးသင်ယူရဦးမှာပါ။